Iindaba zaseTshayina eChinaIzinto zaseTshayina Iindaba zesiTshayina zamaTshayina-INEWS.CHINA.COM.AU Esi sisiza sosapho lwethu oluhlala eMelbourne!Phatha umdlalo omde njengomdlalo wakho wasekhaya, kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengekhaya lakho.Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Idolophu Iindaba Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba Iindaba zaseTshayina eChinaIzinto zaseTshayina Iindaba zesiTshayina zamaTshayina-INEWS.CHINA.COM.AU Esi sisiza sosapho lwethu oluhlala eMelbourne!Phatha umdlalo omde njengomdlalo wakho wasekhaya, kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengekhaya lakho.Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Idolophu Iindaba Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba
IChinatown-China Australia Intengiso evulekileyo
Ikhowudi yeNtengiso yeKhaya
Indawo yentengiso iboniswa njengomzekelo ngasekhohlo .. Nceda ujonge iphepha lasekhaya lewebhusayithi ngobungakanani obuthile.
Isiniki maxabiso kunye nenkcazo
位置 大小（象素） 价格（元/周） 备注
A1 220×100 330 Flash/图片
A2 220×100 330 Flash/图片
A3 220×100 330 Flash/图片
S4 300×100 550 Flash/图片
S5 300×100 550 Flash/图片
S6 300×100 550 Flash/图片
1. Isikhundla se-S yindawo ebanzi yendawo yentengiso, eya kuboniswa kuwo onke amaphepha eendaba, uluhlu lwamacandelo, kunye namanye amaphepha eengxoxo zoluntu.
2. Wamkelekile ukubonelela ngezimvo ngokubambisana kunye nophumelele ukunceda iChinatown-China iAustralia evulekileyo kunye namaqabane ayo.
i-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
QQ okanye WeChat: 28771796
Igama lakho (liyafuneka)